मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको भोलि पल्टै पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बद्धि, कसको कति पुग्यो ? — onlinedabali.com
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको भोलि पल्टै पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बद्धि, कसको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको भोलि पल्टै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरिएको छ । नेपाल आयल निगमले २० भित्र फेरि पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य बढाएको हो ।
निषेधाज्ञामा सार्वजनिक तथा नीजि सवारी साधन नचलेपनि निगमले मूल्य बुद्धि गर्दै आएको छ । शनिबार मध्य रातिबाट लागु हुने गरी निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँले बृद्धि गरेको छ ।
नयाँ मूल्य अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य १२५ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको १०८ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ८० रुपैयाँ पर्नेछ । पछिल्लो पटक जेठ २ गते मूल्य बृद्धि गरी पेट्रोलको मूल्य १२३ रुपैयाँ, डिजल र मट्टितेलको १०६ रुपैयाँ र हवाई इन्धनको ७८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार मूल्य समायोजन गरे पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ रुपैयाँ ३३ पैसा, डिजलमा ३ रुपैयाँ ३३ पैसा र एलपी ग्याँसमा २५८ रुपैयाँ ४६ पैसा घाटा रहेको निगमको बताएको छ ।